ပြည်သူတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍ ဘယ်တော့များမှပြည့်စုံမှာလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပြည်သူတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍ ဘယ်တော့များမှပြည့်စုံမှာလဲ
- Phaung Phaung
Posted by Phaung Phaung on Jan 10, 2012 in Copy/Paste | 20 comments
အခုတလော ခံစားရတာလေးတခုရှိတယ်။ ကိုယ့်အမျိုးဖြစ်မှပဲသိတော့တယ်လေ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်လိုပဲ ပြည်သူအားလုံးရဲ့ကိုယ်စား ခံစားချက်ချင်းတူနိုင်မယ်ထင်လို့ ဒီPost ကိုရေးဖြစ်တာပါ။
ပြည်သူတရပ်လုံးရဲ့ ကျမ်းမားရေးကဏ္ဍပါ… ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာနည်းပညာ၊ဆေးဝါးကအစ အားလုံးလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ဆိုတာ အားလုံးသိကြမှာပါ… အခုက ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာရှင်တွေ ဓါတ်ကင်ချင်ရင် ရန်ကုန်မှာကင်လို့မရပါဘူး … စက်ပျက်နေလို့တဲ့ ။ မန်းတလေး နဲ့ တောင်ကြီးမှာပဲသွားကင်လို့ရပါတယ်။ ရန်ကုန်ကနေ တောင်ကြီးကို ဓါတ်ကင်ဖို့သွားရတဲ့လူနာတွေဟာ နေဖို့ထိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိကြပါတယ်။ တကယ်လို့ တည်းခိုဖို့အမျိုးရှိရင်တောင် တစ်လခွဲလောက်တည်းရမှာ အားနာစရာကြီးလေ။ အခုခောတ်ကြီးက တစ်ရက်တောင် ဧည့်သည်လုပ်ဖို့ခက်ခဲရချည်ရဲ့။ ဒါကြောင့် ဓါတ်ကင်တဲ့ဌာနဘေးမှာ အဆောင်လေးတွေဆောက်ပြီး ငှားရမ်းတဲ့သူတွေ (အဆောင်ပိုင်ရှင်တွေ)ရှိပါတယ်။ ဓါတ်ကင်ရမယ့်လူနာဟာ အနည်းဆုံး ရက်သတပတ်6ပတ် ကင်ကြရပါတယ်။ အဲဒီမှာ နေထိုင်စရိတ်ကြီးပဲ (စားသောက်စရိတ်မပါ) သုံးသိန်းနီးပါးကုန်ခဲ့ကြောင်း သွားရောက်ကုသခဲ့သူကပြောပြပါတယ်။ ပြီးတော့ လူနာကိုဖေးမရမယ့် လူနာဖော် 1 ဦးကတော့ အနည်းဆုံး လိုက်ရမှာပါ။ တကယ်လို့များ အိမ်လုံးစေ့လူတွေ စားဝတ်နေရေးအတွက် မဖြစ်မနေ စီးပွားရှာနေရရင် လူနာနဲ့ဘယ်သူလိုက်နိုင်မှာလဲ ။
မန်းတလေးမှာတော့ ဦးလှထွန်းကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းမှာ တည်းလို့ရတယ်။ လူနာအပြင် လူနာစောင့် – ပေါင်း(2)ဦး တည်းခိုဖို့လက်ခံတယ်။ အစားအသောက်အခမဲ့စီစဉ်ပေးတယ်။ လူနာ ဓါတ်ကင်သွားဖို့ ကားကအစ စီစဉ်ပေးတယ်။ ဒါကတော့ ၀မ်းသာစရာပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲဒီမှာလည်း လူများလွန်းတော့ စောင့်ရပြန်ရော။
ပြောချင်တာက အစိုးရအနေနဲ့ ဒီလိုလိုအပ်ချက်တွေကို အမြန်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးစေချင်ပါတယ်။ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကင်တဲ့စက်အသစ် ၀ယ်လို့မရဘူးလား ။ အဲဒီလို တနယ်တဝေးထိသွားကင်နေရရင် စားစရိတ်+သွားစရိတ်+နေထိုင်စရိတ် အပြင် ကြာရင်လူနာပါပင်ပန်းပြီး လုံးပါးပါးနိုင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ဓါတ်ကင်လို့မရတာကြာပြီတဲ့။ ကိုယ်ကလဲ ကိုယ့်အမျိုးဖြစ်မှပဲ ဒီကိတ်စတွေကို သိရတော့ အံ့တောင်သြမိပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအကြောင်းအရာကို မီဒီယာကနေတဆင့် အစိုးရအဖွဲ့များသိအောင် ကြိုးစားကြည့်ပါဦးမယ်………….
တော်သေးပြီ…………………… ။ အားလုံး ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
About Phaung Phaung
has written 25 post in this Website..
သစ်တစ်ပင်ကောင်းလို့ ငှက်တစ်သောင်းနားနိုင် တဲ့သူဖြစ်လို၏....
View all posts by Phaung Phaung →
ဟွန့် view ပဲကြည့်လို့ရပြီး Post တက်လား/မတက်လားမသိ
ကမှော့်ပိုစ့်မှာ တက်မေးတာ ဒီပိုစ့်ကို ရေးဖို့လား
ငှက်တစ်သောင်း နားနှိုင်ပါစေ …
သများလဲ ခုမှ သတာပါရို့ 
စားဝတ်နေရေး.ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ ပေါပေါလျှံလျှံ စီမံပေးသင့်တယ်.ဂျာ
ပြီးတော့ မီးအားက တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်လို့ Diode တို့ Condenser တွေလောင်သွားလို့တဲ့
အခု မှာထားတယ် ရန်ကုန်ဆေးရုံအုပ်ကြီးက
micro wave မီးပူရယ် အသားကင်စက်ရယ်
Good point of view, Please let me fill up some sketch.
Do you know how to maintain the machines / Medical equipments at the hospital?
I knew that there wasadepartment named ” Bio- Medical Engineering “.
Before 2000, there were only2bases in Myanmar.
One at the Yangon General Hospital and second at Mandalay General Hospital.
It was true there was no enough Man- Power at that department to take care all medical equipments such as X’ Ray Machines, Radiology, Laboratory equipment, Operation room equipments, etc:.
Before 1990 there were several well trained engineers at that department.
But I knew only one AGTI was appointed at Mandalay General Hospital and he gotaone year training at Japan by JICA.After his resignation, no substitution there until 2000.
Yes, we can get the medical Equipments by donations but the root causes are how to maintain it and the essential environment of the equipments such as room condition, power supply condition and readiness of spare parts.
အနော်က machine ပညာရှင်တော့ ဟုတ်ပါဘူး electrician တစ်ယောက်ပါဂျာ့
AGTI က လူက ဘာလို့နှုတ်ထွက်သွားတာလဲ ဂျာပန်မှာသင်ပြီးတော့
Around 1982, Japan donated some advanced X’Rays machines to Myanmar and some Asian country. We though their main aim was to sell spare parts. As example, 1 X’ Ray machine was out of service. That department ( only 1 AGTI,2THS and2Evening course technicians ) took over2months to find faulty IC. After it, requested to YGH to get spare part. YGH requested to JICA. And so on..
Total nearly6months that machine was out of service.
By the way, that department had to take care all medical equipments including Air Conditioners of all hospitals and dispensaries of upper Myanmar.
လှူတာတောင် ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းရောင်းချဖို့တွက် ရည်ရွယ်တယ်
X’ Ray က IC လောင်တာထင်တယ် ( ထင်တာပြောတာနော့ )
ပညာရှင်တွေက ရှိတော့ရှိတယ် ကြောက်လို့ပုန်းနေတာနဲ့ ပြည်ပထွက်တာနဲ့ဆိုတော့
ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်နဲ့ ပညာတော်သင်တွေ ရှိလာရင် ကောင်းလာပြီဗျ
အခုပေါ်နေတာက စက်တစ်စက်က ပျက်တယ် နောက်စက်က ကောင်းရင် program နဲ့ code ကူးပြီးပြင်လို့ရနေပြီဗျ
လခမပေးလို.တဲ.နောက်ပြီးတော.အဲ.ဒိအလုပ်ကအောက်ဆိုဒ်မရှိဝူး……အာရကေ weak တယ်…
စက်တွေကအများဂျီးရယ် …. စက်ထိန်းသိမ်းတဲ.ပညာရှင်ကတယောက်ထဲ………
One more story of MGH ( around 1989 ). The Radiology machine’s timer system was malfunctioned.
The root cause was the frequency of power supply ( only 49 Hz received to hospital). Our talented Myanmar engineers had to solve the problem by using Inverter for that machine. 49 Hz power supply connected to an China Inverter. The 50 Hz output of Inverter connected to the machine and the machine was OK.
I meant important of surrounding. I do respect them because of their best trying hard for the patients. They did their best. And I realized one new idea = the engineers are saving the life of patients by supporting the doctors and medical technicians.
အဲ့ဒီ့ နှုတ်ထွက်သွားတယ် ဆိုတဲ့ AGTI က စွယ်တော်ရွက်လေးများလား :grin: :grin: နောက်တာနော်.. ကြိုဆိုပါတယ် စွယ်တော်ရွက်ရေ.. အားပါးတရ ပြောနိုင်ရေးနိုင်အောင်လို့ မြန်မာ လို ရိုက်နိုင်အောင် ကျင့်ပါလား .. မကြာပါဘူး .. ရိုက်တတ်လာပါလိမ့်မယ် .။
Sorry, He was not me. I was justavolunteer of that department inashort period and I understood how difficult of their works.
I just want to high light the important of Maintaining , repairing and readiness of spare parts.
Thank you for your advice to try on Myanmar font. Yes, Sure, I will.
ဓာတ်ရောင်ခြည်ကင်တဲ့စက်အသစ် အလှူရှင်များဝိုင်းဝန်းထည့်ကြလို့ ရန်ကုန်ရောက်နေပါပြီ။
လှူတုံးကတော့ 2010 ဒီဇင်ဘာဆို ရောက်မယ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းသော အကြောင်းတွေ ကြောင့် 2011 နှစ် ကုန်ခါနီးကျမှ ရောက်လာပါတယ်တဲ့။
ဘာဖြစ်လို့ စတင်အသုံးမပြုသေးလဲ လေ့လာလိုက်ပါအုံးမယ်။
ပြည်သူတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍ ဘယ်တော့များမှပြည့်စုံမှာလဲ ???
တိုင်းပြည် အရမ်းချမ်းသာမှပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကွယ် ။
အခုက တိုင်းပြည်က အရမ်းဆင်းရဲနေပါသေးတယ် ။
ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး ။
လက်ရှိ တိုင်းသူပြည်သားတွေ တစ်သက်လောက်မှာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွယ် ။
လက်ရှိမြန်မာအစိုးရဟာ မြန်မာလူထုအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို လက်တွေ့အလုပ်နိုင်ဆုံးအချိန်၊ အခွင့်အလမ်းသာတဲ့အချိန် ဟာ ခုဆိုက်ရောက်နေတဲ့ကာလပါဘဲ။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကပ်ကြီးဆိုက်နေတာ၊ မြန်မာပြည်တင်မကပါဘူး။ တိုးတက်တဲ့အမေရိက၊ဥရောပလိုနိုင်ငံတွေမှာ လူနာကုတင်ပေါ်ထိုင်ရင်း ခံစားရတဲ့ရောဂါထက်အဆမတန်ကြီးမားတဲ့ ဒုက္ခတွေခါးဆီးခံနေရတဲံအချိန်ပါ။ ပြဿနာ အခြေအမြစ်ကလေးတွေ ချကြည့်ရအောင်-
(၁) အဆမတန်ဈေးကြီးလာသော ဆေးဝါးနှင့်ကုသစရိတ်၊
(၂) ဆရာဝန်အပါအ၀င်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ အပေါ် တရားစွဲဆိုမှု နှုန်းမြင့်မားလာမှု
(၃) ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလောကကြီးတခုလုံးကို privatization စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းအဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းအောင် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များက အဓမ္မကြိုးစားလာကြခြင်း၊
(၄) ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စံနစ်တခုလုံးကို ဆေးနည်းတိုနည်းသုံး၍ပြဿနာဖြေရှင်းအောင်ကြိုးစားနေကြခြင်း၊
ဒီအရင်းအမြစ်တွေကို တကယ်လက်တွေ့မြန်မြန်ဖြေရှင်း ရမဲ့နည်းဗျူဟာကို၊ လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားကို လက်ရှိ မြန်မာအစိုးရက မြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့ဘဲလိုပါတယ်။
အသိအမှတ်ပြု ထင်မြင်ချက်ပေးကြတာတဲ့အတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်………
ဟုတ်တယ်နော်… ကျမ်းမာရေးက စီးပွားရေးလိုဖြစ်နေတယ် ( ပုဂလိကဆေးရုံတွေတအားများလာတာကို ကြည့်ခြင်းဖြင့်) ။ ပိုက်ဆံမရှိရင် သေဖို့ထိုင်စောင့်နေရသလိုဖြစ်နေပြီ။ နာမကျန်းဖြစ်ရမှာတောင် တော်တော်ကြောက်လာပြီ……….
အင်း … သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ အမေ အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်တာ … တောင်ကြီးမှာ ဓါတ်သွားကင်ရရှာတယ် … နေစရိတ်စားစရိတ်အပါဝင် အသွား အပြန်စရိတ်ထောင်းတာနဲ့ တစ်မိသားစုလုံး ချွေတာခဲ့သမျှ သုံးလိုက်ရရှာတယ်ကြားတာ စိတ်တောင်မကောင်းဘူး … ။
Shar Thet Man (99820 Kyats )